आज मानुषी लघुवित्तको आईपिओ बाँडफाँड हुने, कति जनाले पाउने भए त?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। मानुषी लघुवित्तको आईपिओ बाँडफाँड आज हुने, कति जनाले पाउने भए त ? मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपिओ बाँडफाँड आज मिति २०७८।०५।६ गते आईतवार हुने भएको छ । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धक रहेको यस.बि.आई. मचेन्ट एण्ड बैंकिङ्गका अनुसार प्रि–अलोटमेन्ट भैसकेको र सम्भव भएसम्म आज आईतवार आईपिओको रिजल्ट निस्कने छ । सदा झै यस पटकको आईपिओको रिजल्ट यदि आज आईतवार निस्किएमा, निष्काशनको समयमै अनलाईनबाट हेर्न केही कठीनाई भएपनि बेलुका २ बजे पश्चात भने रिजल्ट हेर्न सहज हुनेछ ।
आईपिओको निष्काशन रिजल्ट www.iporesult.cdsc.com.np, यस.बि.आई. मचेन्ट एण्ड बैंकिङ्गको वेभसाईट तथा स्वयं मानषी लघुवित्तको अफिसियर वेभसाईट मार्फत हेर्न सकिने छ । लघुवित्तको जारी पुँजी रु. १०,९३,७५,०००।– को ३६ प्रतिशतले हुन आउने रु.३,९३,७५,०००।– रकम बरावरको प्रति शेयर रु.१००।– अंकितका दरका जम्मा ३,९३,७५० कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागिएको हो ।
जसमा कर्मचारीहरुलाई ०.५ प्रतिशतले हुन आउने ५४६७ कित्ता शेयर छुट्टाईएको छ । त्यस्तै ५ प्रतिशतले हुन आउने १९,६८८ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टाईएको छ भने बाँकी ३,६८,५९३ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्रि निष्काशन गरिएको हो । जुन आज रिजल्ट निष्काशन हुदैछ । आवेदनकर्ताहरु मध्ये ३६८५९३ जनाले १० कित्ता हात पार्नेछन् ।
लघुवित्तको लेखापरिक्षणलाई अध्ययन गर्दा प्रति शेयर आम्दानी रु.१०.०२ रहेको छ । प्रति नेटवर्थ भने रु. १३०.९४ छ । त्यस्तै संचित नाथा भने १४,७५५,००० रहेको देखिन्छ । केयर रेटिङ्ग नेपाल लि.का अनुसार यस लघुवित्तले “CARE-NP B+ (IS) [Single B Plus (Issuer)]” रेटिङ्ग पाएको छ ।
७० लाख कित्ताको आईपीओ छुट्ला है, आज आवेदन दिने अन्तिम मौका !
एनसीसी बैंक १४ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्दै, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?